Ungayicima njani i-DNS cache kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra | Ndisuka mac
Uyicima njani i-cache ye-DNS kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
I-Doman Nane Servive, eyaziwa ngokuba yi-DNS, yiyo elawula ukutshintshela phakathi kwegama lamaphepha ewebhu kunye needilesi ze-IP, eyona dilesi yendawo apho ikhoyo. Ngamanye amaxesha i-DNS esinikwa ngumboneleli wethu, inkqubo eqhutywa ngokuzenzekelayo, ayihlali isebenza njengoko kufanele kwaye inkqubo yokuguqula ithatha ixesha elide kunesiqhelo, ichaphazela isantya sonxibelelwano xa sifuna ukufikelela kwiphepha lewebhu. Ukuba unengxaki ne-DNS kwaye uzimisele ukuyitshintshela kuGoogle, olona lucetyiswayo kuwo onke amatyala, Kuya kufuneka ucime i-cache ye-DNS ukuze basebenze ngokufanelekileyo.
Okokuqala, kufuneka kukhunjulwe ukuba le nkqubo yenziwa ngeTheminali ngomgca wokuyalela, ke ijolise kubasebenzisi abaphambiliAbo bayaziyo ukuba yintoni ingxaki yonxibelelwano lwabo kwaye sele bediniwe kukubona indlela isantya sabo esihamba kancinci ngayo ngaphandle komnikezeli wabo wokufikelela enikezela nasiphi na isisombululo. Ukucoca i-cache ye-DNS ye-Mac yethu ukuze i-DNS entsha isebenze, kufuneka siqhubeke ngolu hlobo lulandelayo.
Cima i-cache ye-DNS kwi-macOS
Kuqala siya kwiglasi yokukhulisa ebekwe kwindawo ephezulu ngasekunene kwebar ephezulu.
Kwi-Spotlight, sibhala iTheminali kwaye siyivule.
Emva koko kufuneka sikope kwaye sincamathisele lo myalelo ulandelayo:
Isudo killall -HUP mDNSResponder; yithi i-cache ye-DNS iye yagungxulwa
Nje ukuba sikhuphele kwaye sincamathisele lo mgca wokuyalela, sicinezela u-Enter, sifaka ipassword yeakhawunti yethu kwi-Mac ukuvumela utshintsho olwenziwe (ngenxa yokusetyenziswa komyalelo weSudo) kwaye kunjalo.
Ngoku kufuneka silinde nje imizuzu embalwa ukuze i-DNS isebenze kwaye yonke i-cache iye yakhutshwa ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyicima njani i-cache ye-DNS kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
Uhlaziyo lwamva nje kwiLightroom 6, uguqulelo lomhleli wezithombe onelayisensi engapheliyo
Sebenzisa i-MacBook yakho eyi-intshi eyi-12 ngaphandle kokuyisusa kwimikhono yayo yokukhusela